संसद् विघटनपछि पूर्वराजाको चेता''वनी: अब जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ! विप्लव रि'सले आगो, कसैलाई नछो'ड्ने (जनचेतनाका लागि सेयर गराै) -
Home News संसद् विघटनपछि पूर्वराजाको चेता”वनी: अब जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ! विप्लव रि’सले...
संसद् विघटनपछि पूर्वराजाको चेता”वनी: अब जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ! विप्लव रि’सले आगो, कसैलाई नछो’ड्ने (जनचेतनाका लागि सेयर गराै)
संसद् विघटनपछि पूर्वराजाको चेता”वनी: अब जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ! विप्लव रि’सले आगो, कसैलाई नछो’ड्ने
नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको पक्ष र विरोधमा आफ्नो शक्ति संगठित गर्न सोमबार आफूनिकटहरूको छुट्टाछुट्टै भेला गरेका छन् । ओलीले बालुवाटारमा र दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनमा भेला गरेका हुन् ।
नेकपाका १ सय ७४ सांसदमध्ये आइतबार बानेश्वरको संसद् भवनमा ९० जना उपस्थित भएर पार्टी नेतृत्वले लिएको कदममा साथ दिन भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदीय दलको बैठक नाम दिइएको भेलामा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमको खुलेर विरोध गरे । भेलाले संसद् विघटनको प्रतिवाद गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कमिटी र बुधबार संसदीय दलको बैठक हुने भएकाले विघटित संसद्का सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न उनीहरूले निर्देशन दिएका छन् ।
भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । भेलामा विघटित प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू उपस्थित थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रिय सभाका २४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुधबारलाई फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद् भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले सांसद पद जीवित रहेको बताए । ‘जनताका प्रतिनिधिबाट बनाइएको संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानबाट हामी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई बलि चढाउने काम गरियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार अपहरण गरिएको छ । जुन अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । हामीलाई मारियो भनिएको छ तर संविधानले हामीलाई जीवितै राखेको छ ।’
Previous articleExclusive पोखरामा फोहोर नबगाउने नालिले मानिस बगाएर ल्याएपछि ! को हुन यी मानिस यस्तो अबस्थामा
Next articleरमेश थापाको फ**रार साथीहरु मिडियामा। रमेशलाई टिकटक बनाउन झोलुङ्गे पुलको तारमा झु**न्डिन उक्साए